Esperto Di Semalt: 7 SEO Essenziale Che Devi Sapere Mgbe ịchọta CMS
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịntanetị, ị ga-enwe ike ịmepụta ya na saịtị (CMS) site na ịntanetị. N'ihe ruru eru na ịntanetị na-arụ ọrụ, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ịntanetị di na nwunye. Ọ na-akpali ọ bụla site na ị na-agụnye ihe nchọgharị weebụ ma na-achọ a search engine optimization (SEO) site na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ inweta online ahịa ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-enweta SEO site na SMM potrebbero, ị nwere ike ịmepụta ya dị ka Dijitalụ Nchịkwa maka oke funzionare meglio. La maggior parte dei sistemi di managemente dei contenuti hanno una buona reputazione e servizi. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweghị ihe ọ bụla ị ga-eme, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụnye aha na Google - haznedar arcelik servisi.
Ma ọ bụrụ na ị na-eji CMS, chebara echiche gị na ndị ọzọ, ị na-eme ka Max Bell, ọ Gestore di Successo Clienti di Ọkachamara .
1. Nkọwa H1, utu aha, na nkọwa meta.
M na-eji web tinye n'ọrụ na Google site na-eme ka ọ bụrụ na ị na-echekwa ihe ọ bụla dị mma. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị na-achọ ka ị na-eme ka ọ dị mma. Ihe dị mkpa sapere come personalizzare (leggere: ottimizzare) i tag h1, i dati della pagina o meta meta. Nke a na-eme ka a na-eme ka usoro ihe omume dị iche iche na-enyere gị aka ịzụlite usoro ihe omume.
2. Possibilità di utilizzare attribute Alt site na immagini.
Ọ bụrụ na ị ga - achọpụta na ị ga -
3. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Chọta ihe na-eme ka ị na-eme ka ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-echekwa. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị iche iche, a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-achịkwa SERP. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ị ga-eme, ị ga-esonye na ị na-elekwasị anya na ihuenyo..Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ dị mfe.
Ọ dị mkpa ichebara CMS che consente di personalizzare le pagine senza modify na intero contentuto del modello. Ọ bụ mantenimento dell'UX dovrebbe essere una preoccupazione primaria. Alcuni modelli nwere ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mma.
5. The URL na-eme ka ọ bụrụ na ị na-adọrọ adọrọ.
Site ọ bụla ị na-aga na SEO, pịa URL che si sceglie dovrebbe contenere. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ ga-adị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-agụ ya.
6. Nsogbu canonici e contentuti duplicati.
Nsogbu nsogbu ka ị na-abanye na nchịkọta na URL simile. Dị ka ihe atụ, ọ na-achọpụta ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ele anya na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe. Ọ na-ejikwa mbipụta na-eme ka a web njikọ na traffic na-achọ pagine oyiri. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, riducendo le sue possibilità di classificazione prima di quella del concorrente. Dị ka ihe atụ, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ. A na-ebipụta ma ọ bụrụ na ị na-echekwa ihe ọ bụla dị mkpa na-eme ka ị na-arụ ọrụ na-enyere gị aka ịbanye na nke 301. A na-enyere gị aka inweta CMS nkwado.
7. Add-ons, plugin na moduli.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe dị mkpa na cmni CMS. Enwere m ike ịnweta ihe mgbakwunye na SEO o anche WordPress.
Ọ bụrụ na ị na-enweta ihe nchọgharị weebụ, ị ga-enwe ike ịmepụta ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. A modo nke ọ bụla dị ka internet ahịa site na ọ bụla nkwado nke weebụ. SEO doro anya na-eme atụmatụ site na-arụ ọrụ. Ọ na-echere viene fornito na i sistemi di managemente dei contentuti e le cose necessarie. N'iji ya mee ihe dị ka ndị ọzọ, ị ga-enwe ike ịhapụ ohere dị iche iche na-eme ka ọ dị mkpa na-eme ka a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.